Ukubeletha | Baby | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Umzwa wokuvikeleka ngesikhathi uncelisa
Ingabe kufanele ngiphuze ingane yami? Umbuzo abaningi omama abalindeleyo bayabuza. Kwabanye kuyinto ecacile, kodwa hhayi kwabanye. Abaningi bayazibuza ukuthi kufanele bakwenze kanjani nokuthi "bangakwenza kanjani" nokuthi yini okufanele bayibheke lapho bebeletha.
Ukubeletha - indaba yokuzwa
Ngokuyinhloko ingane ngokuyinhloko ivame ukungavikeleki, kodwa abomama abaningi bahlangabezana nokuzizwa ngokuphindaphindiwe lapho ingane yesibili noma yesithathu isifakazela ngokungazelelwe izifiso ezihlukene ngokuphelele nokuphendula ngokuphathelene nokondla, njengabantwana bakithi abadala.
Ingabe kufanele ngiphuze ingane yami? Ulwazi kanye namathiphu
Ukubeletha njengokukhulumisana okungaqondile phakathi komama nomntwana
Kodwa-ke, okuhlangenwe nakho koomama nababelethisi kubonisa ukuthi ukucindezeleka noma ukuhlela ukubeletha kungenangqondo. Ngoba ngakolunye uhlangothi kukhona ulwazi, kodwa ngakolunye uhlangothi ingane.
Futhi lokho kusho nje kule ndaba. Izintandokazi zakhe, izidingo, imizwa yendlala, kodwa futhi nesifiso sokusondelana nokuvikeleka kuzosinquma inkambo kanye nesigqi sokuncelisa ngesikhathi sokubeletha. Phela, isakhamuzi esincane sezwe ngumuntu oyinhloko ngokuncelisa.
Uma umama ethemba ingane yakhe, uhileleke kuwo, futhi unamandla, empeleni kuyindlela engcono kakhulu yokunqoba ubunzima bokuqala. Lokhu kusebenza futhi kumbuzo wokuthi umuntu kufanele ancelise isikhathi eside kangakanani. Futhi, akukho mithetho, akukho mthetho. Uma nje ethanda umama nengane, kuhle.
Uma isidingo sohlangothi olulodwa siphelile, iningi lezinye izikhathi ohlangothini olunye lubuye lubuyele ngokuzizwa ngeso lengqondo ukuthi sekuyisikhathi sokuyeka. Ukukhulumisana phakathi komama nomntanami kuphezelelwe kuphela ngemvelo nokuzizwa, okungafani nokuncelisa.
Uma ukuncelisa ibuye kubhekwe ohlangothini lwezakhi, kuqhubeka ukugcizelela ukuthi ayikho indawo elinganayo yobisi lwebele. Izingxube ezithathelwanayo ezinikezwa kulezo zentengiselwano zisekelwe enkantini, ubisi lwe-soy noma i-mare futhi zilingisa ubisi ngangokunokwenzeka. Kodwa abanakho ukubunjwa okunjalo.
Kungenxa yokuthi lezi kuphela ziqukethe izinto ezibalulekile zokuzivikela omuntu okudingwa ngumuntu omncane, ikakhulukazi engxenyeni yokuqala yonyaka yokuvikelwa kwesidleke sakhe. Lezi ziqukethe ikakhulukazi i-colostrum, i-foremilk okuthiwa, eyethulwa ezinsukwini zokuqala emva kokuzalwa. Khona-ke kufika ekubunjeni ubisi lwebele langempela.
Nansi ukwakheka futhi okuhlukile. Emgwaqweni ovela ebusweni obusweni lobunikazi, okuqukethwe kwamaprotheni kunciphisa, okuqukethwe kwamafutha ne-carbohydrate kwanda. Ubuningi obhiqizwa buxhomeke esimweni sokufuna isidingo, kodwa isidingo singahluka futhi. Nazi izibalo ezibaluleke kakhulu eziqhathanisa ubisi lwebele nobisi lwezinkomo:
Ubisi cow sika
Ithebula libonisa ukuthi ubisi lomuntu nje luhambisana ngqo nezidingo zengane. Ubisi lwezinyosi luqukethe amaprotheni amaningi noma amaprotheni omntwana, okungalimaza izinso. Ngakho-ke, ubisi lwezinkomo akufanele lunikezwe ngonyaka wokuqala wokuphila. I-carbohydrate ne-fat content, ngakolunye uhlangothi, iphansi kakhulu.
Kodwa-ke, ngaphezu kombuzo wokudla okunomsoco, ukuncelisa ukubeletha nakho kugcwalisa omunye umsebenzi obalulekile: isibopho sengqondo phakathi komama nengane. Ikakhulukazi ekuqaleni, lapho uqala "ukwazi omunye nomunye", uma ingane ifuna indlela yakhe ngaphandle kokuvikelwa kokufudumala kwesisu esiswini sakhe futhi isadinga ukuphepha okuningi. Khona-ke ukubeletha kusiza ukukhuthaza lezi zici.
Ukubeletha kunika ukuvikeleka kwezingane
Ubuhlobo obuseduze, obunothando phakathi komama nengane, okukhiqizwa ngesikhathi sokuncelisa ibele, kunzima futhi ukuthatha isikhundla nganoma yini enye. Okubalulekile lapha yindawo enokuthula, efudumele kanye nenduduzo eningi.
Ayikho i-TV noma umsakazo okufanele ugijime ngendlela, ifoni kufanele ivaliwe futhi umsebenzi wendlu kufanele unikezwe emavikini okuqala uma kunokwenzeka. Kule ndawo, bobabili bangakujabulela ukusondelana futhi bakhe ubuhlobo obuseduze nomunye.
Yiqiniso, ukuncelisa ibele kunezici ezingokoqobo kakhulu. Kuhlale njalo futhi kuyo yonke indawo ukudla okulungile, ekubunjweni okufanele kanye nokushisa, okulungele ukulungiswa kanye nokungenazigciwane. Akukho ukuthutha kwebhodlela, ukushisa ibhodlela nezinye izesekeli kuyadingeka. Lokhu kuvumela futhi umama ukuguquguquka nokuzikhandla kwenhlangano encane.
Konke kukho konke, kuye kwadala ukuhlakanipha kwemvelo ukuze ukuncelisa ibele kuqale kahle empilweni yomntwana omusha omncane. Ukudla okunempilo, ngokomzwelo kanye nokusebenza. Yiqiniso, kunabesifazane abangakwazi noma abangathandi ukuncelisa. Lezi zinsuku nazo zilungile, ngoba akufanele kube khona ukuphoqelela imizwa yakho. Lokho ngeke kube kuhle ezinhlangothini zombili. Kodwa-ke, uma kukhona isifiso futhi kungenzeka ukubeletha, lokhu kufanele kukhethwe kunoma yisiphi isisombululo sokufakelwa.
Ukubeletha - Faka nobaba